iSAVER + no voalohany mikasika efijery mpanova matetika ao amin'ny dobo filomanosana orinasa, izay vokatry ny ezaka mitohy amin'ny fitadiavana fanavaozana ny hanomezana traikefa mpanjifa tsara kokoa.
Paompy, izay ny lehibe indrindra tokana mpampiasa ny fonenana herinaratra, tsy mandevona hery izany tsy ilaina, fa koa miteraka feo tsy tapaka, izay raha ny tokony ho ambony 60, indraindray aza hatramin'ny 70 dBA. iSAVER + dobo paompy inverter dia mety tsara vahaolana ho an'ny angovo mihazakazaka mamonjy sy mandry fahizay.
Miaraka amin'ny fameram-potoana ny asa, dia afaka ny paompy na mihazakazaka amin'ny hafainganam-pandeha foana, na nametraka hatramin'ny 4 timers ho an'ny fandidiana isan'andro, sady samy nitondra ny olona iray hafainganam-pandeha. Amin'ny 80% voavonjy amin'ny ambany hafainganam-pandeha, na dia nihazakazaka azy io 24 ora isan'andro amin'ny hafainganam-pandeha ambany, ianao dia mbola mandoa ny latsaka. A fahefana fanjifàna famakiana ny fampisehoana an-tsaina anao ny fomba hery be dia mampiasa ny paompy eo ambanin'ny isan-karazany ny hafainganam-pandeha.
Miankina amin'ny raharaha tsirairay, mandoa indray ny fotoana mety ho kely noho ny 12 volana. Eto ambany dia misy marokoroko kajy ny amin'ny hatraiza ny afaka mamonjy isan-taona miaraka amin'ny iSAVER + dobo filomanosana inverter nametraka paompy.
Ao anatin'ny vanim-potoana fito volana lomano, fandaniana isan-taona € 752 Taorian'ny fametrahana ny iSAVER + inverter amin'ny rafitra, fandaniana isan-taona € 169
- Miova Speed ​​Pool Pump fameram-potoana
Output Current Max 5.5A Max 12a Max 4a Max 8a